Muxuu Ilaahay u Oggolaadaa Shar iyo Silic? | War Wanaagsan
1. Sidee buu sharku u bilowday?
Ilaahay waqti dheer buu oggolaaday inay dadku is maammulaan siduu inoo tuso inay xallin karin dhibaatooyinkooda
Sharku wuxuu dunida ku bilowday markuu Shayddaanku beentii u horreysay sheegay. Bilowgii Shayddaanku wuxuu ahaa ruux kaamil ah oo ku noolaa samada wuxuuna lahaa ikhtiyaar uu ku falo xumaan ama wanaag. Laakiinse runta muu xajisan. (Yooxanaa 8:44) Caabudaaddii uu Ilaahay xaq u lahaa buu damcay. Shayddaanku Xaawa oo ahayd naagtii u horreysay been buu u sheegay oo wuxuu ka dhaadhiciyay inay isaga dhegeysato intay Ilaahay addeeci lahayd. Aadan Xaawa buu ku raacay inuu Ilaahay addeecin. Goʼaanka Aadan baa sababay silica iyo dhimashada.—Akhri Bilowgii 3:1-6, 19.
Markuu Shayddaanku Xaawa ugu taliyay inay Ilaahay maqlin wuxuu bilaabayay ka hor imansho xukunka Ilaahay iyo darajadiisa Ugu Sarreysa. Binuʼaadanka ugu badnaantooda waxay raaceen Shayddaanka inay Ilaah xukunkiisa diidaan. Markaasuu Shayddaanku noqday “madaxda dunida.”—Akhri Yooxanaa 14:30; 1 Yooxanaa 5:19.
2. Ilaahay abuurtiisa ma waxba ka qaldanaa?
Ilaahay shuqulladiisa oo dhan waxay yihiin kaamil. Binuʼaadanka iyo malaaʼigta uu Ilaahay abuuray si qumman bay Ilaahay u addeeci kareen. (Sharciga Kunoqoshadiisa 32:4, 5) Innaga Ilaahay wuxuu nagu abuuray ikhtiyaar aan ku kala dooranno xumaan iyo wanaagba. Xornimadaasi waxay ina siisay fursad aynu Ilaahay tusno jacaylkaan u qabno isaga.—Akhri Yacquub 1:13-15; 1 Yooxanaa 5:3.
3. Muxuu Ilaahay wax uga qaban waayay dhibaatooyinka iyo silica ilaa hadda?
Maxay tahay sababta uu Yehowah waqti kooban u oggolaaday in xukunkiisa laga soo horjeedsado? Siduu inoo tuso in ku dadaalka maammul aan tiisa ahayn bilaa faaʼiido tahay. (Wacdiyahii 7:29; 8:9) Lix kun oo sanadood ee taariikhda binuʼaadanka baa inoo caddeysa in maammulayaasha binuʼaadankaa dagaal, dulmi, xaqdarro iyo cudurro tirtiri kari waayeen.—Akhri Yeremyaah 10:23.
Marka layska horkeeno maammulka Ilaahay iyo kan binuʼaadanka Ilaahay maammulkiisa baa kuwa aqbala wax u tara. (Ishacyaah 48:17, 18) Mar dhow Yehowah wuxuu burburin doonaa dowladaha binuʼaadankoo dhan. Kuwa xukunka Ilaah doortay keliya baa dunida degganaan doona.—Ishacyaah 11:9.—Akhri Daanyeel 2:44.
Daawo fiidiyowga Muxuu Ilaahay Silica u Banneeyaa?
4. Fursaddee buu Ilaahay dulqaadkiisu ina siiyaa?
Shayddaanku wuxuu ku adkaystay inuu qofnaba Yehowah u adeegayn damac laʼaan. Beentaas ma beeneyn kartaa? Waad kartaa! Dulqaadka Ilaahay gebigeenna wuxuu ina siiyaa fursad aan ku kala dooranno xukunkiisa ama kan binuʼaadanka. Sidaan nolosheenna u nool nahay baan ka tusi karnaa wixii aan dooranay.—Akhri Ayuub 1:8-12; Maahmaahyadii 27:11.
5. Sidee baan u dooran karnaa xukunka Ilaahay?
Waxaan dooranno baa muujiya inaan doonayno xukunka Ilaahay
Waxaynu doornaa Ilaahay xukunkiisa markaynu raadinno oo ku dhaqanno caabudaadda runta ah ee Eraygiisa Kitaabka Quduuska ah ku qoran. (Yooxanaa 4:23) Markaynu diidno inaan ka qaybqaadanno arrimaha siyaasadda iyo dagaal sidii Ciise oo kale baan tusnaa inaan diidnay inuu Shayddaanku maammulaheenna noqdo.—Akhri Yooxanaa 17:14.
Shayddaanku wuxuu isticmaalaa quwaddiisa inuu faafiyo xaaraanta iyo waxyaalo dhibaato ku keenaya. Markaynu diidno waxyaalahaas oo kale asaxaabteenna iyo ehelkeennaba malaha way ina wiirsan doonaan ama way naga soo horjeesan doonaan. (1 Butros 4:3, 4) Markaas waa inaan goʼaan gaarno. Miyaan la socon doonnaa kuwa Ilaahay jecel? Miyaan addeeci doonnaa xukuumaddiisa xigmad iyo kalgacayl leh? Haddii aynu sidaas yeelno waxaynu caddeynaynaa inuu Shayddaanku been sheegay markuu yiri qofna Ilaahay addeeci maayo haddii ay ku adkaato.—Akhri 1 Korintos 6:9, 10; 15:33.
Jacaylkuu Ilaahay u qabo binuʼaadmiga awgiis baan u hubnaa inay sharka iyo silicuba dhammaan doonaan. Kuwa muujiya inay tan rumaystaan baa adduunka weligood ku raaxaysan doona.—Akhri Yooxanaa 3:16.
Wadaag Wadaag Muxuu Ilaahay u Oggolaadaa Shar iyo Silic?